Excavator Bucket စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူအတွက် China Double Worm Slewing DriveWanda
Excavator Bucket အတွက် Double Worm Slewing Drive
အမှတ်တံဆိပ် မော်ဒယ် ဝန်ဆောင်မှု အရွယ်အစား လက်မှတ် အထုပ် အာမခံ
XZWD Dual Worm Slewing Drive OEM စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။ စံ ISO9001 အထပ်သားအစွပ် 1 နှစ်
1. အကယ်၍ သင်သည် စံထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူသော ဖောက်သည်ဖြစ်ပါက၊ အသေးစိတ်ပုံများရေးဆွဲရန်အတွက် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
2. သင်စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များလိုအပ်ပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ထံသို့ ပုံဆွဲအား အချိန်မီပေးပို့ပါ၊ သင့်အတွက် quotation နှင့် ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကို ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ပါမည်။
3. အခြားလိုအပ်ချက်များရှိပါက ကျွန်ုပ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ငါ မင်းကို အချိန်မီ အကြောင်းပြန်မယ်။
2. ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ISO9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်အညီ တင်းကျပ်သည်။
3.Strict in-process အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပေးပို့ခြင်းမပြုမီ 100% ကုန်ချောစစ်ဆေးခြင်း၊
5. လျှောက်လွှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် စံသတ်မှတ်ထားသော ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် APQP၊ PPAP၊ FEMA ကို လက်ခံခြင်း။
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် စံထုတ်ကုန်များနှင့် စံမဟုတ်သော ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်နမူနာများ၊ စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲမှုများ၊ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ် မြေပုံဆွဲခြင်းနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါသည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒီဇိုင်း၊ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးမှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စသည်တို့အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုများစွာကို ပေးဆောင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စဉ်ဆက်မပြတ်ရည်မှန်းချက်အဖြစ် သုံးစွဲသူများအား ကျေနပ်လောက်သော အသုံးချမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ဖောက်သည်များအား အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များ ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးပြု၍ စဉ်ဆက်မပြတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အပြန်အလှန် နားလည်မှုနှင့် ဆက်ဆံရေးကို တိုးမြှင့်ကာ ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
1. သံချေးတက်ဆီဖြင့် ဖြည့်ပါ။
3. Plywood case, Pallet, Steel frame တွင် ပြုပြင်ထားပါသည်။
သင့်တွင် မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်များရှိပါက ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်သွယ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည် 24 နာရီအတွင်း သင့်ထံ အကြောင်းပြန်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။
ယခင်- XZWD Stock Slewing drive worm gear drive ကို အချိန်တိုအတွင်း ပေးပို့ခြင်း။
နောက်တစ်ခု: 2021 ဂီယာမဟုတ်သော သေးငယ်သော bearing မော်ဒယ် 010.20.250 slew turntable bearing
ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ Slew Drive
ဆိုလာခြေရာခံကိရိယာ Slewing Drive
ဆိုလာခြေရာခံစနစ် Slew Drive
24V DC မော်တာဖြင့် ဆိုလာခြေရာခံကိရိယာအတွက် slewing drive